डा गणेश दंगाल
पाठेघरको मुखको क्यान्सर एउटा प्राणघातक रोग हो । तथ्यांकअनुसार, यो रोग विकासोन्मुख देशका झन्डै ८६ प्रतिशत र विकसित देशका १४ प्रतिशत महिलामा देखिएको छ । विकसित देशहरूमा यो क्यान्सरले महिलाहरूमा हुने क्यान्सरको करिब ६ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । विकासोन्मुख देशहरूमा भने यो अझै बढी छ । स्तन क्यान्सरपछि यो क्यान्सर दोस्रो नम्बरमा आउँछ । यो रोग जुनसुकै उमेरका महिलालाई पनि लाग्न सक्छ । कम उमेरमा लागेमा यो अझ बढी खतरायुक्त हुन्छ ।
नेपालका महिलामा देखिने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर ९सर्भाइकल क्यान्सर० सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो । यो क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस ९एचपिभी० को संक्रमणले हुन्छ । यो संक्रमणलाई प्रि क्यान्सर भनिन्छ । यो भाइरस पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ । समयमै संक्रमण पत्ता लगाउन नसके ८ र १० वर्षपछि यो क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । संक्रमण भए÷नभएको प्यापस्मेयर टेस्ट ९गर्भाशय श्राव परीक्षण० गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो पाठेघरका कोषिका सामान्य अवस्थामा रहेरनरहेको पत्ता लगाउने सरल र छरितो विधि पनि हो । यो परीक्षण सस्तो पनि छ र यो जाँच गर्दा महिलालाई दुख्दैन।
यो रोकथाम गर्न सकिने रोग हो । किनकि यसलाई क्यान्सर हुनु अगावैको अवस्थामा पत्ता लगाउन र उपचार गर्न सकिन्छ । व्यवस्थित बृहत पूर्व परीक्षण कार्यक्रम वेल अरगानाइज मास स्क्रिनिङ प्रोग्राम०ले गर्दा अति विकसित देशहरूमा यस रोगका रोकथामका उपायहरू प्रभावकारी भई रोग घट्दो क्रममा छ । दूर्भाग्यवश नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा रोगी ढिलो फैलिएको अवस्थामा मात्र उपचारका लागि अस्पताल आउने गर्छन् । हामीकहाँ व्यवस्थित पूर्व परीक्षण कार्यक्रम नभएको तथा कहिलेकाहीँ ठूला अस्पतालहरूमा एवं क्लिनिकहरूमा मात्र स्क्रिनिङ गरिने हुँदा यसको रोकथाम हुन सकेको छैन।
प्यापस्मियर सन् १९५० मा सुरु गरिएको थियो र यो एक गुणस्तरयुक्त सेवाका रूपमा विकसित देशहरूमा स्थापित भएको छ । यसले गर्दा क्यान्सर हुनु पूर्वको अवस्था सुरुमै पत्ता लगाउन सकिने हुँदा उपचार पनि सुरु अवस्थामै गर्न सकिन्छ । ९० प्रतिशत रोगीलाई प्यापस्मियर वा अन्य स्क्रिनिङ जस्तै ‘भिज्युअल इन्स्पेक्सन विथ एसिटिक एसिड ९भिआइए० परीक्षण गरेमा सुरु अवस्थामै रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ।
१. यौन व्यवहारजन्य कारण
१. यौन सम्पर्कको लगत्तै हुने रक्तस्राव ९कन्ट्याक्ट ब्लिडिङ० ।
२. महिनावारी अघिपछि योनीबाट हुने रक्तस्राव वा महिनावारी बन्द भइसकेका महिलाहरूको योनीबाट रगत ९पोस्ट मेनोपोसल ब्लिडिङ० आउनु ।
३. रक्त अल्पता ९ज्यादा रक्तस्रावको कारणले हुने० वा गुप्तांगबाट असामान्य तथा अस्वाभाविक तरल पदार्थ बग्नु ।
४. ज्यादै फैलिएको अवस्थामा तल्लो पेटमा पीडा हुने, खुट्टाहरू सुन्निने, दिसापिसाबमा रगत देखा पर्ने आदि ।
फैलिएको अवस्थाको क्यान्सर उपचारका लागि ज्यादातर विकिरणले सेकाउने प्रविधि ९रेडियो थेरापी० को प्रयोग गरिन्छ ।
केमोथेरापी ९सुईद्वारा नसामा लगाइने औषधि० को प्रयोगले यो रोग नियन्त्रण मात्र हुन्छ । निको हुँदैन । प्रायःजसो पुनः रोग दोहोरिएका बिरामीहरू एवं सर्जरी रेडियोथेरापीले निको नभएका बिरामीलाई केमोथेरापी दिइन्छ ।
शल्यक्रिया वा रेडियोथेरापीपछि बिरामीलाई हरेक तीन–तीन महिनामा पहिलो तीन वर्षसम्म त्यसपछि हरेक ६–६ महिनामा थप दुई वर्षसम्म र त्यसपछि बाँचुन्जेलसम्म बार्षिक रूपमा अस्पतालमा सम्बन्धित बिशेषज्ञसँग जचाउनु जरुरी हुन्छ । कम उमेरका बिरामीमा हर्मोन प्रतिस्थापना थेरापी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । रेडियोथेरापी पाएका बिरामीहरूले उपचारको केही महिनाभित्रमै यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ । अन्यथा योनी साँघुरिने वा खुम्चने डर हुन्छ । यो सरुवा रोग होइन, त्यसैले संभोगबाट लोग्नेलाई सर्देैन । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न सम्भव भएकाले निम्नलिखित कुराहरू गर्नु आवश्यक छ ।
महिलाहरूले नियमित स्त्रीरोग परीक्षण र हरेक वर्ष ९प्यापस्मेयर० परीक्षण गराउनु पर्छ । धेरै जनासँग यौन सम्पर्क गर्नु क्यान्सरको एक कारक तŒव भएकाले सोबाट जोगिनु पर्छ ।
गुप्तांग सम्बन्धी रोगहरूको समयमै उपचार गराउनु पर्छ ।
रोट, बिँडी, खैनी, तमाखु जस्ता सूर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन गर्नु हुँदैन ।
कुनै लक्षण नै नभएका स्वस्थ महिलाले पनि आफ्नो पाठेघर तथा प्रजनन अंगको जाँच सकभर विशेषज्ञबाट गराई प्यापस्मियर ९गर्भासय श्राव परीक्षण० वा भिआइएमार्फत स्क्रिनिङ गराउनु जरुरी छ । लेखक स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् ।